Kursiga carruurta ee tilmaanbixiyaha marka la barbardhigo talooyinka tifaftirka
Start Ilmaha & Ilmaha ammaanka kuraasta caruurta
1 Badbaadada carruurta iyo carruurta oo la siinayo kuraasta caruurta ee ku haboon
2 Sidee loo aqoonsan karaa kursiga caruurta ee tayo sare leh?
3 Tayada iyada oo loo marayo calaamadda imtixaanka ECE
4 Miyuu jiraa kursiga caruurta ee wadada?
5 Maxay tahay hababka loo xulanayo carruurta?
6 Meeqooyinka kursiga caruurta ee la heli karo?
6.1 Gaariga ilmaha
7 Taageerida dib u soo noqoshada haddii ay dhacdo gaadiid culus: faa'iidooyinka nidaamka safarka
7.1 Faa'iidooyinka Rabshadaha Diidmada:
8 Kursiga caruurta ee caadiga ah ee kooxda 1 ama kooxda 2 / 3
9 Waa maxay nidaamyada amaanka ee la heli karo si loo ilaaliyo ilmaha kursiga ilmaha?
9.1 Nidaamyada badbaadada ayaa la heli karaa:
10 Ilaalinta Isofix - Kuraasta caruurta ee kuraasta leh oo si fudud loo rakibo
Badbaadada carruurta iyo carruurta oo la siinayo kuraasta caruurta ee ku haboon
Badbaadada baabuurka ayaa ka horeysa. Hadday tahay xilliga fasaxa, safarka dukaanka ama safarka gaaban ee kindergarten, carruurta iyo dhallaanka waa in la siiyaa dareenka ugu sareeya, sidaa darteed amniga looma dayacin. Sababtan darteed, isticmaalka kuraasta carruurtu waa mid sharci ahaan loo qoray si ilmaha loo siiyo saldhigga ugu wanaagsan si uu u noqdo mid ammaan ah oo la ilaaliyo inta uu gaariga wadayo. Maalmahan kuraasta caruurta waxaa laga helaa naqshado badan si aysan u fududeyn inaad doorato kursiga saxda ah marka hore.
Sidee loo aqoonsan karaa kursiga caruurta ee tayo sare leh?
kuraasta caruurta oo tayo sare leh waa adag tahay in la aqoonsado at jaleecada hore, maxaa yeelay, shaydaanku wuxuu u yahay, sida inta badan in faahfaahinta. Ku dheji ansixinta bacda kursiga, sii sheeg macluumaadka ku saabsan in kursiga loo isticmaali karo gaadiidka wadada sida waafaqsan tilmaamaha EU. Soo saarista kursigaas oo kale waa in uu ka dhacaa waddanka halkaas oo nabadgelyada alaabta shakhsi ahaaneed loo hubiyo. Kaliya sidan ayaa kursiga ilmaha loo isticmaali karaa halis la'aan. masaafada lagu talinayo ee alaabta raqiis ah iyo ma-magaca iibiya qaadan doonaa, in kasta oo soo jiidan qiimaha macquulka ah, laakiin aan lahayn ammaanka garan ama shaabadda. kuraasta caruurta oo tayo sare bixiyaan kursiga a kursiga, waxaa la dhisay qalabka ilmaha u roon iyo in la hubiyo heer sare ah raaxada, xataa on safar dheer. Khilaafka waxaa sidoo kale la kulmay on kuraasta ilmaha iyo kuraasta caruurta, ee dhererka iyo culayska ilmaha si gaar ah go'aan doorashada ee kursiga loo baahan yahay. Guud ahaan, kuraasta carruurta ee casriga ah ayaa lagu dari karaa gaari kasta waxayna bixiyaan taageero marka loo eego amniga ilmaha. Kursiga ilmaha ee tayada sare leh ee soo saaraha tayada leh ayaa sidoo kale u oggolaanaya isticmaalka damaanad qaadka. warranty this gudahood, kursiga waxaa badanaa lagu bedelay free of dhaawac iman kara soo-saaruhu.
Tayada iyada oo loo marayo calaamadda imtixaanka ECE
Warshadaha soo saara kuraasta carruurta ma aha inay calaamadiyaan kuraasta iyagoo leh shaambeyn tijaabo ah, laakiin sidoo kale leh calaamadda imtixaanka ECE. Qalabkan imtixaanka ECE-da wuxuu bixiyaa macluumaad ku saabsan haddii kursiga caruurta ama caruuraha loo ogol yahay isticmaalka Jarmalka. Isticmaalka ECE-NORM R 44 / 04 ayaa lagu qeexay bixinta oggolaanshahan. Tijaabooyinka shilalka ee faahfaahsan oo lagu fuliyay EU-da oo dhan ayaa hubiya in macaamiisha la xaqiijin karo in kuraasta imtixaanka baaritaanka ECE ay bixin doonto taxadarka heerarka sare ee xannaanada carruurta. Qaar ka mid ah shirkadaha qaarkood waxay ku dhejiyaan calaamadda qalabka kursiga, kuwa kalena ku dhegaan. Calaamadda tijaabinta liinta ayaa waxay u adeegtaa sida muuqaal ahaan la garan karo oo muujinaya badbaadada kuraasta caruurta oo sahlan iibsashada kursigaas oo kale. Si kastaba ha ahaatee, kormeerka sticker Norm ECE R ka 44 / 04 oggolaanshaha ma gunaanad ku saabsan badbaadada dhabta ah ee kursi, waxa damaanad qaadaya iibsaday kaliya in kuraasta ay dhab tijaabiyey ee Midowga Yurub oo ansixiyey. Marka la barbar dhigo sidayaasha ilmaha iyo kuraasta caruurta, sidaas darteed, waxaa iska cad in xitaa in kuraasta in shaabadda noocan oo kale ah waxaa laga yaabaa in farqi weyn oo meesha ammaanka.
Heerka ugu dambeeyay waxaa lagu magacaabaa ECE-R129 waxaana sidoo kale loo yaqaana heerka imtixaanka i-Size. Sannadkan 2013, heerkan ayaa loo isticmaalay markii ugu horreysay waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa sababtoo ah heerkani wuxuu bixiyaa amniyad dheeraad ah. Gaar ahaan aagga of shil ay suurto gal ku lug leh saameynta kooxda, Heerka imtixaanka this waxaa loogu talagalay si loo hubiyo ilaalin dheeri ah si ay u heerarka ugu dambeeyay ee aagga of kursiga ilmaha. Ku alla kii helaa R tirada jeeg Norm ECE 44 / 04 kursiga ilmuhu leeyahay ilaalinta ku filan marka shopping, heerka R129 ECE ah macaamiisha siinayaa ilaalin dheeraad ah.
Miyuu jiraa kursiga caruurta ee wadada?
Kaliya hal qof oo leh nidaamka xakamaynta ee baabuurka ayaa loo oggol yahay inuu qaado ilmo. Sharcigani wuxuu u adeegayaa ilaalinta caruurnimada wadada gaadiidka, waxana uu hadda ka badiyay wadamada EU-da. Yaa maalmahan on jidadka Germany waa on jidka iyo ilmo gaadiid gaariga, oo waa mid loo isticmaali ku xiran tahay xajmiga iyo miisaanka, sharci ansixiyey kursiga ilmaha ama kursiga caruurta ee sharci ahaan la ansixiyey. Marka laga soo tago ciyaarta sahlan ee nolosha, ciqaabta sare ayaa laga yaabaa inay ku hanjabaan. Sidaa darteed, Jamhuuriyadda Federaalka, waxaa jira shuruuda daryeelka caruurta. Caruurtu waa inay isticmaalaan kursiga caruurta ee baabuurka ilaa ay da'doodu tahay 12. Tani waxay khusaysaa cabbirka jirka ee 1,50 cm. Wanaagsan, ama halkii digniin, marwalba waa la go'aaminayaa marka ilmuhu aanu si fiican ufiirsaneynin kursiga ilmaha. Haddii aan la isticmaalin kursiga caruurta, kantaroolka gaadiidku wuxuu noqonayaa mid qaali ah. Xaaladdan, darawalku waxa uu ka helaa barta cabsida ee Flensburg iyo sidoo kale waa inuu bixiyaa 60 Euro oo ka soo jeeda jeebkiisa. Tan iyo markii ay tani tahay oo ku saabsan daryeelka ilmaha, khubaro kaala talin xitaa ay fahmi karaan in la kordhiyo Verwarngeldes si ilmaha si ku filan loo xaqiijisatay.
Kuraasta caruurta waa ma aha oo kaliya in ka dhawrsada gaari u gaar ah, laakiin waa in sidoo kale loo isticmaali in cab ama baska iskuulka ama tababaraha, haddii carruurta waa in loo kaxaystay 12 sannadood kuwaas oo aan weli dhaafto height ah 1,50 cm. Shirkado badan ayaa bixiya kursiga ilmaha hore u safarada ay u, laakiin haddii aad rabto in aad u ciyaaro ammaan, Oo Iibsaday ay kursiga caruurta ee gaarka ah iyo u isticmaali on safarka soo socda long-distance baska ama taxi.
Maxay tahay hababka loo xulanayo carruurta?
Si loo fududeeyo waalidka inay helaan kursiga carruurta ee ku haboon, soo-saarayaasha ayaa u kala qaybiyay saddex kooxood, kuwaas oo loo kala qaybiyey miisaankooda. Kooxda koowaad waa cabirka 0 / 0 + waxaana loola jeedaa hababka loogu yeero dhallaanka. Kabaha ilmaha waxaa loo isticmaalaa ilaa da'da 15 miisaan ahaan ilaa kilo 13. Kabaha dhallaanka ayaa la dejiyaa inta badan kiisaska ka soo horjeeda jihada socdaalka, sababtoo ah taasi waxay sii wadi doontaa ilmaha xitaa ka sii fiican. Waxay ku xiran tahay saldhiga Iso-FIX waxayna ku xiran tahay suun seddex-dhibcood ah, raacida ilmaha oo aan waxba ka jirin. Kooxda xiga waxaa lagu magacaabaa "1" waxayna ku haboon tahay carruurta ilaa saddex sano. Miisaanka waa inuusan ka badnayn kilo 18. Si ka duwan sidayaal ilmaha dhaqanka, kursiga caruurta ee kooxda 1 la Jaha dhinaca safarka, in kastoo ay jiraan a daydo yar ee suuqa loo isticmaalo jihada wadista iyo hore u ogaado habka suunka suunka leh oo ay codsiga. Hannaanyo dheeraad ah, oo lagu daray kooxda 1, waxaa lagu qabtey xayiraad. Carruurta ka weyn miisaanka 9 Kilo waxay isticmaalaan kuraasta caruurta ee kooxda 2 / 3. Kuraastaasi waxay ku shaqeynayaan miisaan culus oo ah miisaanka 15 waxaana loo oggol yahay ugu badnaantii ilaa sanadka 12. Iyadoo kala qaybinta nidaamka kooxeed ee waalidka walwalsan waxay heli karaan xitaa kursiga saxda ah ee da'da da'da iyo miisaanka ku haboon.
Xalka hagaajinta ee 'Cybex Silver Solution X-fix, kooxda kursi gaar ah' 2 / 3 (15-36 kg), oo leh Isofix, ururinta 2018, Rumba Red tilmaame
Kursiga caruurta ee tayo sare leh oo tayo sare leh oo leh adeeg muddo dheer ah - Caruurta laga soo bilaabo da'da qiyaastii ah 3 ilaa qiyaastii 12 sano (15-36 kg), oo ku habboon baabuurta leh iyo la'aanta ISOFIX
Badbaadada ugu sareysa - Ilaalinta saameynta isku dhafan ee isku dhafan (nidaamka LSP), 3 tilt-hagaajinta madaxa-toosan
Qalabka raaxada ee dhexdhexaadka ah ee '11', dhejisida gadaal dambe, kursiga barkinta oo raaxada leh
Ku xirnaanta fudud ee gaariga oo leh suunka gaariga iyo ikhtiyaar u leh ISOFIX xasilooni dheeri ah, daboolista meesha laga saari karo - Waxay ku habboon tahay mashiinnada dharka lagu dhaqo (30 ° C), Qalabka ikhtiyaariga ah: Daboolka xagaaga
Baaxadda keenida: 1 Xalka Kursiga Gaariga ee leh Nidaamka Isku Xirka ISOFIX, incl. Qalabka qalabka rakibidda ISOFIX, daboolka maaddada: 100% polyester, cabirrada (LxWxH): 41 x 47 x 64 cm, culeyska: 7 kg, midab: Rumba Cas
Meeqooyinka kursiga caruurta ee la heli karo?
Ilmuhu waxa ay ka faa'iideysanayaan maalgashanaanta isticmaalka gawaarida. Gaariga, sida magacu soo jeediyo, ayaa laga dhigayaa jihada safarka waxayna bixisaa difaac dheeraad ah ilmaha. Xitaa Fariin degdeg ah lama filaan ah, ilmaha in Reboarder ammaanka si mug leh, iyo sida ay u leeyihiin imtixaanada ugu dambeeyay oo ka mid ah kuraasta iyo sidayaal dhallaanka. Gawaarida si habboon u ilaalisa laf-dhabarka ilmagaleenka iyo madaxa ilmaha. Dareemayaasha waxay u egyihiin sida madhacadda ilmaha. Khubarada ku talinaynaa isticmaalaya Reboardern xataa ilaa da'da ilmaha ee 4 sano, sababtoo ah kaliya la 4 sano, dhabarta afka ilmo-galeenka ee ilmaha ayaa ku filan xasilin in ay oggolaadaan in kursiga ilmaha caadiga ah ka heli karaa codsiga. Ka dib markii la falanqeeyo Qoondaynta Group kuraasta ilmaha, waalidka kartaa horeba ka tirsan 1 in ka dhigan tahay haddii miisaanka ka badan kilo 13, ka Reboarder a classical dhaqaaqo kursiga caruurta ee kooxda 1 ah. Gaar ahaan, haddii ilmuhu yar yahay, isbeddel ayaa lagula talinayaa, maaddaama ammaanka haddii kale aan la hubin karin. Ilaa inta ilmuhu ku habboon yahay gidaarka, waa inay sidoo kale isticmaashaa.
Taageerida dib u soo noqoshada haddii ay dhacdo gaadiid culus: faa'iidooyinka nidaamka safarka
Meesha madax banaan ee fadhiga cunuggu ma aha mid calaamad u ah in kooxda 1 lagu bedeli karo marxaladda hore. Waalidiin badan ayaa ka cabanaya in ilmuhu yaraado wakhti aad u gaaban, maaddaama uu ilmuhu korayo miisaankiisa, laakiin ujeeddadan, shirkadaha wax soo saarku waxay sameeyeen nidaamka safarka wax ku oolka ah. Iyada oo adeegsiga habka rakaabka, ilmuhu waa la geyn karaa gawaarida ilmaha. Tani waxay meesha ka saartaa gaadiidka culus ee wariyeha laga soo bilaabo albaabka ilaa gadaasha iyo dhabarka qofka qaadaaya culeyska si aad u liita.
Faa'iidooyinka Rabshadaha Diidmada:
waxaa lagu dari karaa gawaarida ilmaha
gaadiidka fudud ee gawaarida gaadhiga
Kursiga caruurta ee caadiga ah ee kooxda 1 ama kooxda 2 / 3
Kooxaha kuraasta caruurtu waa kaliya talobixin, maaddaama waalidku mar walba fiiro gaar ah u yeeshaan marka aad raadineyso kursi ilmo cusub. Si kastaba ha ahaatee, si gaar ah, xajmiga iyo miisaanka ilmaha aad bay u kala duwanaan karaan, sidaas darteed waxaa lagu talinayaa in ay dhacdo shaki inuu ka tago ilmaha waxaa la tijaabiyey oo daruuri ma aha bixinta si isutagga dareenka haddii ilmuhu weli meel tusaale ahaan dhibaatooyin Reboarder. Si kastaba ha ahaatee, haddii miisaanka iyo dhererka kuraasta taam Group 1 ama 2 / 3 la danbeyn loo isticmaalo. Xaaladdan oo kale, waa in la ogaadaa in labadoodu garbahay, iyo madaxa waa in ku filan oo ay taageerayaan si ilmuhu helo gargaarka ugu fiican iyo ammaanka waxaa lagu taageeray. Waxaa si fiican u dhici kartaa in madaxa ay laftu a sentimitir yar kor ku xusan inta kale, laakiin waa in la qaadaa si loo hubiyo in weli si fiican xitaa la size ku haboon ilmaha dhawray lagu tiiriyo kursiga ilmaha oo aanu simbiriirixan dul.
Waa maxay nidaamyada amaanka ee la heli karo si loo ilaaliyo ilmaha kursiga ilmaha?
Warshadaha ayaa mar walba doonaya inay bixiyaan ugu dambeyntii fikradaha ammaanka iyo inay tijaabiyaan. Xeerarka Midowga Yurub waxay hubiyaan in dhammaan kuraasta caruurta ay maraan jadwalkaas oo kale si nabadgelyo leh mar walba loogu balan qaadi karo. Haddii kursigu uusan laheyn shaabad ogolaansho ama bixino sifooyin ammaan oo aan la aqoon, waxaa lagula talinayaa inaad si dhow u eegto iyo, haddii shaki jiro, si aad u doorato shirkad kale ee kuraasta caruurta. Habka amniga ee caanka ah, waa qalabka qabashada kursiga caruurta. Carruurta ku qalabaysan nidaamka badbaadada noocan oo kale ah waxaa lagu qalabeeyaa qalab yar oo miis ah kaas oo, xaalad shil ah, ay qabato oo difaacdo jirka ilmaha. Bedelkii hababka suunka, xarkaha ayaa hubiya in meelaha dhibka leh ee ilmaha la ilaaliyo si waafaqsan. Fikradda kale ee amniga ayaa ah seddexda dhibcood, kuraasta badbaadada carruurta ee kooxda 2 / 3 badanaa waxay bixiyaan nidaamka badbaadada noocaan ah. Suunka seddexda ah ayaa ilmuhu si fiican ugu xiran yahay kursiga, laakiin suunku ma ogola inuu suunka qoorta ilmaha jarjariyo, halkii uu ku dhejin lahaa bartamaha culayska jirka oo dhan. Si loo hubiyo ilaalinta ugu fiican ee suurtogalka ah haddii ay dhacdo shil gaari oo saameeya saqafka kursiga ilmaha, shirkadaha badani waxay bixiyaan teknooloojiyada difaaca dhinacyada dhinaca. Dhinacyadani waxay saameyn ku yeeshaan tiknoolajiyada ilaalinta si ay u hubiyaan in ilmuhu uusan saameyn buuxda ku laheyn saameynta shilalka iyo jirkuna si ku filan loo ilaaliyo.
Nidaamyada badbaadada ayaa la heli karaa:
nidaamka gaashaan Impact
saddex dhibcood suunka
teknoolajiyada Side ilaalinta saamaynta
Ilaalinta Isofix - Kuraasta caruurta ee kuraasta leh oo si fudud loo rakibo
Isofixku wuxuu bixiyaa difaac dheeraad ah. Marka la barbardhigo kuraasta hore ee caruurta, kuwaas oo kaliya oo dabacsan ama lagu xiray gaariga, tiknoolajiyada isofixku waxay u oggolaaneysaa kursi xoog leh kursiga. Isofix wuxuu u taagan yahay hay'ad caalami ah oo lagu hagaajinayo. Ururka Heerarka Caalamiga ah ee u qardarin waxaa laga helaa baabuur badan oo casri ah ka hor iyo ka aan kuu ogolaanayaa oo kaliya rakibo fudud adigoo gujinaya habka laakiin hubiyo cabiran in kursiga mar dambe ma ay simbiriirixan karo, Halkii, xubno ammaanka kursiga haysta doono by heerka ugu hay'adda caalamiga ah ee udubdhexaadinta soo saaraha baabuurta inta u dhaxaysa safka kursiga iyo si adag loogu rakibay gaariga. Kuraasta carruurta ee soo saarayaasha casriga ah ayaa inta badan lagu qalabeeyaa Isofix si fududna loogu xiraa qalabka. By fiyuusyada Isofix oo heysata, kursiga ilmuhu mar dambe ma ay simbiriirixan iyo sidoo kale hubiyaan in xitaa dadka isticmaala laylis aan suurto gal ku rakiban kartaa kursiga si qaldan. Waalidiinta doonaya inay iibsadaan kursigaas oo kale waa inay hubiyaan in xulashada Isofix-ka oo guud ah laga soo dhex-qaaday qeybta soo saaraha. Waalidiinta badankood waxaa sidoo kale lagu talinayaa inay lahaadaan nidaamka Isofix-ga ee baabuurta la dhigo. Isofix wuxuu xaqiijiyaa amniga iyo ugu dambeyntiiba xataa wuxuu badbaadiyaa waqtiga inta lagu jiro kursiga kursiga.
Raadinta kursiga caruurta waa in aan loo malaynin. Badbaadadu waa arrin muhiim ah, sidaa daraadeed waxaa haboon in la maalgeliyo fikradaha ugu dambeysiga amniga iyo in la eego shaashooyinka muhiimka ah ee imtixaanka. Qaybinta kuraasta carruurta ee carruurta iyo dhallaanka ayaa sidoo kale u oggolaanaya xulashada fudud ee kursiga ku habboon. Si kastaba ha noqotee, miisaanka iyo miisaanka jirka ee ilmaha waa in lagu xisaabtamaa si loo xaqiijiyo amniga ku filan dhammaan xaaladaha. Marka la isticmaalo xalalka nabadgelyada casriga ah, waxaa sidoo kale lagu talinayaa in dib loo dhigo gaariga iyo isticmaalka gawaarida marka la isticmaalayo nidaamka rakaabka.
KIDUKU kursiga gaariga kursiga ilmaha kursiga gaariga, kursiga, universal, ansixiyey in ECE R44 / 04, 6 kala duwan yihiin midabka, 9 kg - 36 kg 1-12 sano, Group 1 / 2 / 3 (/ Pink Gray) Display
The kursiga caruurta ee gaariga hakaga KIDUKU ku qalabeysan yahay suunka 5-dhibic, taas oo lagu hagaajin karo shaqsi ahaan in height ee ilmahaaga. maskax leh, nidaamka tensioner suunka The height-hagaajin hubisaa in marka hore aad dhig ilmahaaga kursiga, ay xirto suunka 5 dhibcood ka dibna in la adkeeyo suunka guud ahaan suunka dhexe ee qolof kursiga. qufulka ammaanka waxay noqon kartaa in 6,0 cm gadaal ama horey u hagaajiyo, taas oo ku xiran ee ilmaha.
Kursigeennu waa la aqbalaa ECE R44 / 04 waxaana la kulmaa dhammaan heerarka amniga Yurub. Ku habboon carruurta carruurta ah 1-3. Badbaado: Si aad u furto xidhitaanka, waxaad u baahan tahay xoogga qof weyn. Qeybta sii-deynta ee suunka suunka ayaa weli qarsoon ilmaha. Kursiga laabta ayaa lagu qalabeeyaa suunka suunka si looga hortago qaliinka. Kursigu wuxuu ku xirnaan karaa oo keliya xirmidda dadka waaweyn - ma jirto wax farsamo ah oo ISO-Fix ah.
Kursiga gaariga ee KIDUKU wuxuu isku fahmayaa inuu yahay kursi koraya oo koraya, taas oo ujeedkeedu yahay qaabka kursiga baaldiga (si loo helo taageero dambe) oo ku xiran motorsport. Kursiga gudaha ee saanqaadayaasha ayaa laga saari karaa. Sidoo kale, gadaashu waa mid laga saari karo, sidaas darteed kaliya qolka hoose ee kursiga ayaa loo isticmaali karaa. Xajka dhererka waa dhererka la isku hagaajin karo ilaa 6 cm Qaybaha baqtigga ee ku xiran badbaadada ayaa laga sameeyaa polyetylenka cufan. Daboolka muraayaduhu waa kuwo laga saari karo oo la dhaqi karo 30 ° C.
Carruurta rakibo Easy: orod suunka ugu horeysay ee mid ka mid ah armrests ah (arrow cas) halkan, ka dibna iyada oo sibraar ka dib (arrow cas), ka dambeeya kursiga ka hor, ka dibna mar kale by dillaac ah dib (arrow cas), ka dibna kale armrest ka hor iyo ka dibna kuuska. Cabirka ka mid ah: total height 64,0 cm - 70,0 cm (kala duwanaayeen lagu tiiriyo hagaajin). Wareegga ugu badan ee ku saabsan 46,0 cm. Furanka xajmiga max. 33,0 cm. Dhexdhexaanta kursiga max. 65,0 cm. Kursiga qoto dheer oo ku saabsan 36,0 cm.
Ku haboon dhamaan noocyada gawaarida leh suunka 3 (suunka waayeelka). Baaxadda gaarsiinta: 1 x KIDUKU kursiga gaariga ee caruurta, 1 x tilmaamo lagu rakibay
Xalka hagaajinta ee "Cybex Silver Solution X-fix", kursiga gaariga ee kooxda 2 / 3 (15-36 kg), oo leh Isofix, aruurinta 2018, Tilmaame Daawashada Madoow
Baaxadda keenida: 1 Xalka Kursiga Gaariga ee leh Nidaamka Isku Xirka ISOFIX, incl. Qalabka qalabka rakibaadda ISOFIX, daboolida agabka: 100% Polyester, Cabbiraadaha (LxWxH): 41 x 47 x 64 cm, Miisaan: 7 kg, Midab: Madow nadiif ah
Maxi-Cosi Priori SPS + kursiga ilmaha oo leh ilaalin waxyeelo aan fiicnayn iyo fadhiga 4 iyo fadhiyada nasashada, kooxda 1 (9-18 kg), oo la isticmaali karo laga bilaabo 9 bilood ilaa 4 sano, muuqaal madow (madow) muuqaal ah
Kusoo jeeda kursiga gaariga caruurta ee 9 - 18 kg (kudhowaad 9 bilood ilaa 4 sano)
Rakibaado fudud oo leh 3-dhibic suunka kursiga
Habka difaaca dhinacyadu wuxuu bixiyaa ilaalin buuxda hadii ay dhacdo waxyeelo
Kursiga ilmaha ee leh jiifa beenta ah wuxuu leeyahay 4 fadhi iyo nasasho
Kursiga gaariga ee kooxdan 'Group 1' wuxuu leeyahay suun wax ku ool ah oo dhexda ku haya suunka kursiga si aad u gelin karto ama uga saari karto cunugga dhowr ilbidhiqsiyo
CYBEX Silver 2-in-1 Kursiga Gaariga Caruurta ee Pallas-Fix, Gawaarida leh ama aan laheyn ISOFIX, Kooxda 1 / 2 / 3 (9-36 kg), Laga soo bilaabo qiyaastii bilood ee 9 illaa qiyaasta 12 sano, Muujinta Madoow ee Daawada.
Kursiga caruurta oo tayo sare leh oo tayo leh oo leh adeeg muddo dheer ah - Caruurta laga soo bilaabo qiyaastii 9 bilood ilaa ugu dhawaan 12 sano (9-36 kg), oo ku habboon baabuurta leh iyo la'aanta ISOFIX
Nabdoonaanta ugu badan - qabato-qoto-dheer hagaajin kara, 3 laab-dheellitirka lagu hagaajin karo, isku-dheelitirka ilaalinta saameynta (Nidaamka LSP)
11 raaxo laaban oo madaxa dhejis ah, Meel hal gacan lagu hagaajin karo oo miis lagu toosiyo, Beddel sahlan oo kursiga caruurta lagu xalliyo X-Fix ee carruurta ka weyn sannadaha 3 (kooxda 2 / 3) iyadoo laga saarayo catcher iyo salka, dib u habeyn lagu sameyn karo
Baaxadda keenida: 1 kuraasta gaariga Pallas-Fix oo leh nidaamka isku xirnaanta ISOFIX, incl. Qalabka qalabka rakibidda ISOFIX, daboolida agabka: 100% Polyester, Cabbiraad (LxWxH): 43,5 x 47 x 71,5 cm, Miisaan: 11 kg, Midab: Madow nadiif ah
Kursiga badbaadada carruurta ee 1st nabadgelyo leh, oo leh kursiga madaxa lagu dhejin karo iyo gadaal dambe, koox raaxo leh 2 / 3 kuraasta gaariga (15-36 kg), oo la adeegsan karo laga bilaabo 3,5 illaa 12 sano, tilmaame madow
Ku habboon adeegsiga laga bilaabo 15 illaa 36 kg (qiyaastii sannadihii 3,5 illaa 12 sano)
Waad ku mahadsan tahay 6 laab-dheellitirka lagu hagaajin karo, kursiga gaariga ee ilmaha ayaa la koray cunugga
Kuraasta difaaca, laba-booska toosan ee la beddeli karo iyo cududda gacan qabashada leh waxay hubiyaan raaxo sare iyo badbaado weyn
Rakibaadda sahlan oo aaminka ah iyadoo la adeegsanayo qalabka fudfudud ee fudfudud oo leh tilmaamaha suunka suurta galka ah
Fudud (2,8 kg) oo loogu talagalay isticmaalka dhaqso iyo fududa ee baabuurta kala duwan
Kursiga booska gaariga ee Petex Max 104 ECE koox ahaan 2-3, caruur ah qiyaastii 3,5-12 sano | 15-36 kg, bandhigo cawlan / casaan
Kooxda 2 & 3
loogu talagalay carruurta laga bilaabo 3,5-12 sano oo leh 15-36 kg
Tijaabiyey sida ku xusan UN ECE R44 / 04
ka samaysan caag HDP caag ah
ku habboon dhammaan kuraasta baabuurta guud
Kurskraft kursiga caruurta ee gaariga SAFETY FX, kursiga caruurta ee gaariga, kursi gaariga, kursiga caruurta oo leh Isofix iyo Top Tether, koox 1/2/3 9-36kg, 5 suun oo ah suunka kursiga, madaxa dhejiska lagu hagaajin karo, ECE R44 / 04, muuqaalka cawlan ee madow
ee loogu talagalay carruurta oo miisaamaya 9 ilaa 36 kg (kooxda ECE I / II / III)
Nidaamka ISOFIX iyo tiknoolojiga ugu sareeya
10-nidaamka xajinta ee xadka (ee kala duwan ee 17 cm)
Nidaamka Twist-Raaxo - nidaamyada hagaagsan ee gadaasha dambe
5 dhibcood suunka badbaadada
Kurskraft kursiga caruurta ee KARI KARTA, kursiga caruurta ee gaariga, kursi baabuur, kursi ilmaha, koox 1/2/3 9-36kg, 5-dhibic suunka kursiga, madaxa dhejiska lagu hagaajin karo, ECE R44 / 04, bandhiga cawlan
Suunka badbaadada waxaa hormariyey sumadda talyaaniga ee ah "Sabelt"
Mashiinka toosan ee lagu hagaajin karo oo xaqiijinaya safar raaxo leh oo aamin ah
Badbaadada dheeraadka ah, taageerada dhinac waxay u adeegtaa inay ilaaliso madaxa ilmaha iyo garbaha
Gogol-xaaraynta dib-u-dhiska ee kuyaal barxan iyo kursiga, ilaali lafdhabarta
Xarkaha garabka ee shakiga ka badbaadiya
Kursiga caruurta ee Maxi-Cosi Titanium 9-36 kg oo leh Isofix iyo jagada fadhiga, waxaa adeegsan kara laga bilaabo 9 Mon. ilaa 12 J., Nomad Black (madow)
kursiga ilmaha A dhowr kooxaha da'da ka bilood 9 12 si sano (oo ku saabsan 9 - kg 36)
tiiriyo fudud oo si fudud u hagaajin koraa heerarka 11 si ay u siiyaan kuwa yaryar gargaarkiinna kama dambaysta ah iyo badbaadada fiican ee ugu macquulsan
Solid ISOFIX iyo Top Tether ee isku xira gawaarida waxay xaqiijinayaan xasillooni saa'id ah xitaa haddii ilmahaagu uusan ku fadhiyin
Kursiga gaariga wuxuu leeyahay shan fadhi oo raaxo leh iyo fadhiisyo nasasho, laga bilaabo fadhiisashada tooska ah iyo hurdada nasashada
Maxi-Cosi Titan waxay leedahay natiijo imtixaan oo wanaagsan
XOMAX XL-518 kursiga ilmaha markaas cirradayda ISOFIX waxaan u koraa ilmaha aan 9-36 kg, 1-12 sano, kooxda 1 / 2 / 3 aan suunka 5 dhibcood iyo suunka 3 dhibcood si ixtiraam leh ayaan saari karo oo la dhaqi karo waxaan ECE R44 / 04 waxaan bandhigay cawlan / madow
Si fudud, degdeg ah oo amaan ah: Ku xirida baabuurka ISOFIX, siiba suunka suunka gaariga haddii gaadiidku aanu taageersanayn ISOFIX.
Koritaanka: kooxaha caadiga ah ee I, II iyo III - miisaanka jidhka ee 9 illaa 36 kg - da'da da'da: qiyaastii 1-12 sano
Qalabka la xannibin karo, dhererka lagu hagaajin karo 5 ee loogu talagalay dadka ugu da'da yar (kooxda 1).
Hagayaasha joogtada ah ee 3 Point of gaariga loogu talagalay kuwa ugu waaweyn (koox 2 iyo 3). Heerka sare ee la hagaajin karo.
Si fudud loo nadiifin karo: Dabooli karo warqad cadeyn ah oo lagu dhaqi karo 30 ° CI sida uu qabo ECE R44 / 04